Umbuzo imibhalo Aircraft
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #255 by Dariussssss
Ngithanda ukubuza, banethemba somebody uyazi ukuthi ...
Zonke ezizenzakalelayo, futhi izindiza eziningi payware Ziningi imibhalo, like isheke izinhlu, isivinini reference nokunye. Ngizama izinyanga ukuthola lezi ngoba uThomase uRuthe A330 / 340, kanye nezinye izindiza eziningi, kodwa namanje lutho. Ngakho, ingabe ukhona yini umuntu azi ukuthi angasitholaphi?
Thanks a lot kusengaphambili.
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki - iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #256 by Gh0stRider203
Well, ngivame sebenzisa Wikipedia for cruise isivinini / engamamitha.
Ngiyathemba ukuthi lokhu kusiza nazo zonke ezinye ..
OKHUNYE uhlole lokho FSX uthi uphethiloli max / gross-isisindo ngokumelene wikipedia, njengoba yini lapho ivame ukuba olunembile. UMA FSX akufani lokho fix lula kakhulu
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 amaviki angu-3 edlule Gh0stRider203.
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #257 by Dariussssss
Inkinga enkulu futhi ubuhlungu ..... yilo, nalapho lindiza ngalinye, uma uya vne, noma ijubane Itafula, tape IAS uthola elibomvu. Not on TR A330 / 340. Ngenxa ukuthi, anginazo umqondo lapho ijubane Itafula of nto ikhona i Akekho owaziyo. Lezizihloko it self is hhayi enikeza lolo lwazi, akekho noyedwa ngathola.
Ngakwazi ukuba bambe out CLS A340 imqingo ... kodwa mina sina singabaze ukuthi kungcono kuyafana ne TR A340.
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki - iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #258 by Gh0stRider203
kahle, siyisebenzele ngokwethembeka ... I go yilokho engikubonayo ungathola for the bird real .....
like in the 747 (kungakhathaliseki yiphi), ngivame ukuba benze 245 ngezansi 10K on enyuka, bese usetha autothrottle whatever ijubane cruise ungaphakathi IAS, ndlela yokugcina Ngivame ukuba ngikwenzele 135 IAS
ijubane Itafula Kulula empeleni ukuthola ukuthi! kungcono ifayela aircraft.cfg
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #259 by Dariussssss
Found it .... kodwa akukho ndlela lena enembile.
enezinto Full Itafula isivinini-120 kts i-Airbus a340-500?
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #260 by Gh0stRider203
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #261 by Gh0stRider203
kungcono shot ESIDE kodwa niyazi yini ... ZAMA kokuthola okuhle kokukholwa, ubambelele Airbus ... sibone uma ngizobe ukukusiza out!
iminyaka 2 2 Sekwedlule amaviki #306 by Dariussssss
Ngemva ezinye search emhlabeni You Tube, ngakwazi ukuthola ukuthi ezinye into ..
A340-600, speed ndlela 160-170 kts, ngesivinini Itafula kokuba ngezansi nje 160 kts, okungenye Woow omkhulu .... Shono ngaba nesikhathi esinzima esinjalo umhlaba le nto. A340s ezincane ... ukuqagela yami best, 5-10 kts speed ephansi, kodwa noma kunjalo ngempela fast.
Ukhona ulwazi olwengeziwe ngale?
iminyaka 2 2 Sekwedlule amaviki #308 by Colonelwing
Incazelo: A340-500,600 nemikhawuko kusuka FCOM
iminyaka 2 2 Sekwedlule amaviki #312 by Dariussssss
Thanks a lot umuntu. Angikwazanga ukuthola it kuleyo ngosi, ayikho indlela ngizokwenzenjani yokuyikhokhela. Kodwa, ngakwazi ukuba bambe it out kwenye indawo. Noma kunjalo, omunye big, ngiyabonga big. I ubengazi le dokhumenti nhlobo.
Isikhathi ukudala page: 0.443 imizuzwana